Ary ny lakozia fotsy - Fanaka - aingam-panahy
Fanaka - aingam-panahy
Seza miendrika U
Rindrin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Fandriana roa sosona
Fandriana ao amin'ny efitranon'ireo ankizy
Trakitra vatasarihana maoderina
Efitra fatoriana maoderina
Efitra ho an'ny ankizy
Fandriana misy farafara fandriana fanampiny
Efitra ho an'ny mpianatra
Seza ho an'ny efitranon'ny ankizy
Lamba lamba ao an-trano
Ahoana ny amin'ny latabatra lakozia fotsy
28 martsa, 2020 16 Febroary 2021 Admin Dakozia maoderina, Dakozia maoderina
Ny traikefa mahazatra an'ny lakozia fotsy madio dia efa teo hatry ny ela. Fa maninona no mbola tazonina io fironana io? Ny loko fotsy dia mariky ny fahadiovana, ny habaka kely dia malalaka kokoa noho izy io ary manome hazavana ny efitrano maizina kokoa. Na izany aza, ny lakozia fotsy miaraka amina lakozia fotsy madio dia mety mangatsiaka loatra. Mba "hanafanana" an'io loko fotsy io dia asaina manampy singa vitsivitsy ao amin'ny efitrano. Azontsika atao izany amin'ny fampifangaroana ireo singa vy misy loko mifanohitra, lamba, manampy singa hazo.
Ny vokatry ny metaly
Ny nikela varahina, varahina, varahina ary voalamina voamaso dia afaka manampy vokany mafana kokoa amin'ny latabatra lakozia fotsy. Ny jiro rindrina misy loko volamena, haingon-trano fotsy mihantona miaraka amina loko volamena kely dia manome faran'izay tsara amin'ny fotsy.
Doko sy metaly
Raha ampitahaina amin'ny fampiasana tafahoatra ny metaly maro karazana dia matetika no ampy ny misafidy loko mifanohitra iray izay, miaraka amina loko metaly, dia afaka manome vokatra tena tsy ampoizina.
Hevitra iray tena niandohana ny fametrahana temotra amin'ny lakozia ao an-dakozia. Na izany na tsy izany, ny rindrina dia manampy loko, dinamika ary fiainana amin'ny latabatra lakozia fotsy.
Nosy dakozia miloko
Ny ampahany lehibe amin'ny lakozia Anglo-Saxon dia ny nosy lakozia. Ireo nosy an-dakozia nolokoana vita amin'ny hazo dia matetika hita ao an-dakozia fotsy, satria tsy vitan'ny hoe mampisy tsy fitoviana fotsiny izy ireo, fa manampy koa ny hakantony, ny fanambinana ary ny haben'ny lakozia.
Ny fampiasana rug dia safidy tena tsara raha te hampiseho loko sy lamina manodidina ny latabatra lakozia fotsy madio ianao. Na izany aza, ny marina dia mpanangona vovoka ny karipetra ary mitera-doza. Isika dia mamily ireo olana ireo amin'ny karipetra tsotra vita amin'ny taila, izay azo ampiharina sy mahaliana kokoa noho ny karipetra tsotra.
Amin'ny valindrihana voaloko, azonao atao ny mitondra loko tsy mahazatra amin'ny habakabaka. Ny valin-drihana dia matetika hosodoko amin'ny iray amin'ireo aloky ny fotsy. Na izany aza, raha misy lakozia fotsy misy lakozia fotsy fotsy kanto, ny valindrihana miloko dia idealy tsara!
Izay latabatra an-dakozia no mety indrindra amin'ny tranonao
Fanaka zaridaina - inona no fitaovana mety indrindra
Lahatsoratra malaza indrindra
Latabatra sy seza ao an-dakozia 29 Mey 2020
TOP 5: Ny fandriana indroa tsara indrindra ho an'ny 2018 hatramin'ny 500 € 20 Novambra 2017
TOP 5: Ny rindrina velona tsara indrindra ho an'ny 2018 hatramin'ny 400 € 20 Novambra 2017
TOP 5: ny fanaka zaridaina maoderina indrindra ho an'ny taona 2018 20 Novambra 2017
Lohahevitra mamirapiratra avy amin'i Colorlib Powered by WordPress
Mandehana amin'ny dikan-finday